Fahasalamana : Tsinjovin’ny fanjakana manokana ny reny sy ny zaza -
AccueilRaharaham-pirenenaFahasalamana : Tsinjovin’ny fanjakana manokana ny reny sy ny zaza
Fahasalamana : Tsinjovin’ny fanjakana manokana ny reny sy ny zaza
26/08/2017 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Ny fahasalamana no voalohan-karena. Sehatra iray tsy ataon’ny fitondram-panjakana ambanin-javatra ny tontolon’ny fahasalamana ary anisan’ny tsinjovina manokana amin’izany ny reny sy ny zaza izay sokajin’olona mila tohana manokana ara-pahasalamana. «Tsy azo tsinontsinoavina ny Reny sy ny zaza raha te-hanana firenena misandratra », araka ny fanambaran’ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina. « Tsy noraisina ho ankapoben-javatra ao anatin’ny fandaharan’asan’ny fahasalamam-bahoaka ny fitsinjovana azy ireo fa tena arahin’asa » hoy ihany izy. Anisan’ny asa mivaingana ny fametrahana toeram-pitsaboana manokana ho an’ireo zaza voan’ny homamiadana, izay nametrahana sampana manokana etsy amin’ny Hopitaly Joseph Ravoahangy Andrianavalona etsy Ampefiloha, izay efa manomboka mihodina. « Ho raisina an-tanana ny ankizy marary ary hanana fanantenana hanana fahasitranana. Tsy mitovy ny fitsaboana ny ankizy sy ny olon-dehibe noho izy ireo mbola afaka mivoatra sy mitombo », hoy ihany ny filoha. Tsy hijanona ho eto an-drenivohitra ihany izany fitaovana izany fa apetraka any amin’ny hopitaly rehetra. Na izany aza, mahatsapa ny fitondrana fa mbola misy ny ezaka atao eo amin’ny fampitomboana ny toeram-pitsaboana eny ifotony sy ny fampitaovana azy ireny amin’ny fanafody. « Misy ny marary mandeha an-kilometatra maro. Tsapako ny fahasahiranana ao an-tokantrano mila tsy ahatsabo tena intsony. Efa miezaka isika ary tsy atao ambanin-javatra ny fahasalamana fa io no voalohan-karena », hoy hatrany ny Filoha izay efa nanatsidika sahady ny hametrahan’ny fitondram-panjakana tahiry manokana ho an’ny fahasalamana, hiarovana ny olona tsirairay sy ny fianakaviany.
Etsy ankilan’izay, Vehivavy malagasy 10 isan’andro no maty eo am-piterahana noho ny antony maro ka ao anatin’izany ny homamiadana mpahazo ny vehivavy. Ho fisorohana izany ary mba ahafahana manao fitiliana mialoha dia misy ny fitaovana napetraka isaka ny distrika misy tobim-pahasalamana ary nohatsaraina sy nampiana ireo fitaovana eny amin’ny CSB mba ho afaka mandray isan’andro ny vehivavy manana olana. Ezaka efa nataon’ny fitondrana ny fametrahana ny « Herinandro ho an’ny reny sy ny zaza » izay tanterahina isaka ny enim-bolana ka nahafahana nijery manokana zaza latsaky ny 5 taona maherin’ny 4 tapitrisa sy vehivavy maherin’ny iray tapitrisa. Tafiditra amin’izany hetsika maimaim-poana izany ny fanaovana vakisiny, fizarana vitamina ary fitiliana aretina mitranga. Mikasika ny loza vokatry ny vaksiny dia nanamarika ny Filoha ary nanome baiko hentitra amin’ny fanaovana fanadihadiana sy fampitsaharana izany any amin’ireo toerana nisehoan’ny loza. « Fahasitranana no andrandraina fa tsy sanatria famonoana ny zaza sy ny ankizy akory. Tokony ho hentitra ny fanaraha-maso. Tsy fanenjehana isa no zava-dehibe fa ny fahasalamana ho an’ny isam-batan’olona », hoy hatrany ny Filoha.
Anisan’ny mitarika ny fanentanana manokana momba ny fahasalaman’ny reny sy ny zaza ny vadin’ny filoham-pirenena, renin’ny malagasy rehetra, Voahangy Rajaonarimampianina, ary nomen’ny sampandraharahan’ny firenena mikambana misahana ny fahasalamana (OMS) mari-pankasitrahana manokana izy ny volana jolay teo. « Anisan’ireo ezaka nataony ny fametrahana ny ivon-toerana Vonjy izay toerana hiainoana sy hanampiana ireo renim-pianakaviana sy vehivavy tanora iharan’ny herisetra isan-karazany », araka ny fanamarihan’ny filoham-pirenena. Ezaka efa nataony ihany koa ny fandidiana ny aretina faharovitan’ny tatavia, azo avy amin’ny fiterahana aloha loatra izay sady maharary no mahamenatra ireo vehivavy ka hanilihan’ny mpiara-monina azy. Nasian’ny Filoha, tsindrim-peo tamin’izany ny fametrahana ny fandrindram-piterahana.
Governemanta Ntsay : Kidnapping, vola sandoka, mersenera
Asan-jiolahy maro toa ny fanafihana mitam-piadiana, fakàna an-keriny, fiparitahan’ny vola sandoka ary trafika isan-tsokajiny no nanamarika ny fitondrana HAT tahaka izao governemanta Ntsay Christian izao… “Mécanisme mafieux” izay no azo ilazana ny zava-misy eto Madagasikara ...Tohiny